10 ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations အများစု | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > အိုက်စလန်သို့သွားပါ > 10 ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations အများစု
သဲသောင်ပြင်များ, Cliff အမြင်များ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေပြာ, နှင့်အံ့သြဖွယ် surfing အသိုင်းအဝိုင်း, ဥရောပရှိဤမော်ကွန်းအဝင်ဆုံးနေရာများသည်အဆင့်တိုင်းတွင်ရှိသော surfers များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. အီတလီကမ်းရိုးတန်းကနေဝေးတဲ့ဒိန်းမတ်အထိ, နှင့်ပေါ်တူဂီ, here are the top beaches for surfing in all of Europe.
1. Godrevy သဲသောင်ပြင်, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ
အချိန်ကောင်းပါပဲ, သင်ဒီမှာမော်ကွန်းရှည်ရှည်နံရံကပ်လက်ဝဲနှင့်လက်ျာဘက်စီးနင်းနိုင်ပါတယ်. ဟုတ်ကဲ့, အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ Godrevy ကမ်းခြေသည်ဥရောပရှိမော်ကွန်းတင်ရန်နေရာအများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. Cornwell တွင်တည်ရှိသည်, တစ်ခု ဥရောပရှိဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကမ်းရိုးတန်းမြို့များ, ဒီကမ်းခြေဟာလှိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်အကြွင်းမဲ့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်.
Godrevy ကမ်းခြေသည်စိန့်အိုင်ဗတ်ပင်လယ်အော်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, နှင့်နွေရာသီ၌တည်၏, သင်ဒီမှာသူတို့ကိုဒေသခံအများအပြားရှာတွေ့လိမ့်မည် နွေရာသီအားလပ်ရက်. အများအားဖြင့်နေပူ, နေရောင်ထဲမှာရဲတိုက်တည်ဆောက်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်မီးပြတိုက်လေးစားခြင်း, Godrevy သည်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးရောင်ခြည်အချို့ကိုပေးသည်ကိုမသိပါ.
ဘယ်တော့လဲ: နွေဦး, စင်ကြယ်သောလှိုင်းတံပိုးအဘို့အပြီလ.
2. ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations အများစု: ပေါ်တူဂီ Peniche
လစ္စဘွန်းလေဆိပ်မှတစ်နာရီ, ဥရောပတွင်ဒုတိယအများဆုံးမော်ကွန်းလှိုင်းနေရာကိုပေါ်တူဂီ၌သင်စောင့်နေသည်. Peniche သည်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၏ကမ်းရိုးတန်းကျွန်းဆွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်, သောတစ်နှစ်ပတ်လုံးဒဏ္wavesာရီလှိုင်းတံပိုးအဘို့ကြီးသောအခြေအနေများဖန်တီးပေးပါတယ်. ထို့အပြင်, ပေါ်တူဂီရဲ့ကမ်းခြေအချို့ရှိပါတယ် ဥရောပမှာအများဆုံးအိပ်မက်ဆိုးကမ်းခြေ.
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အမှတ်လပ်ချိန်, သဲကျောက်တန်း, ရှည်လျားသောကမ်းခြေများအပြင်, Peniche surfing ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိစေရန်. Peniche ကျွန်းဆွယ်နေစဉ်, ထက်ပိုပြီးရှိပါတယ် 30 ၎င်း၏ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက် surfing အစက်အပြောက်, surfing gear ငှားရမ်းရန်နေရာများစွာရှိသည်. သတိရရမည့်အရာတစ်ခုမှာသင်တစ်နှစ်ပတ်လုံးစေးကပ်ခြင်းကိုလိုအပ်သည်, ရေအေးအပူချိန်ကြောင့်.
ဘယ်မှာလဲ: Foz do Arelho သည် Peniche မြောက်ဘက်ရှိသဲသောင်ပြင်များစွာသည်အစပြုသူများနှင့်အကောင်းမြင်သူများအတွက်အံ့သြဖွယ်ရာသဲသောင်ပြင်ဖြစ်သည်, အဆိုပါ lineup သို့သုံးနိုင်စွမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်. အပြာရောင်အလံကမ်းခြေ Supertubos သည်ဥရောပ၌အကျော်ကြားဆုံးသောလှိုင်းကိုစီးနင်းလိမ့်မည်, မြန်ဆန်ပြင်းထန်သော. ဒါကြောင့်, သင်တစ် ဦး အတွေ့အကြုံရှိ surfer များမှာမဟုတ်လျှင်, ဒီလှိုင်းကမင်းကိုနှိမ့်ချလိမ့်မယ်.
လှိုင်း: 80 စင်တီမီတာမှ 2.6 မီတာ.
3. Bundoran, အိုင်ယာလန်
ကမ္ဘာ၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကမ်းရိုးတန်းတွင်, တလျှောက်လမ်းလျှောက်ဖို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကမ်းပါးအမြင်များနှင့်ကမ်းခြေနှင့်အတူ, Donegal ခရိုင်သည်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ၏အထင်ရှားဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်. အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရှိဘွန်ဒိုရန်မြို့သည်ဥရောပတွင်အကောင်းဆုံးအဆင့်မြင့်လှပသည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
Bundoran is home to the most famous waves, အမြင့်ဆုံး. ထိပ်သည်ပြီးပြည့်စုံသောလက်ဝဲဘက်ဖြစ်သည်, ပိုမိုအားကောင်းလာသည်. ဒါကြောင့်, ပြီးပြည့်စုံသောလှိုင်းလုံးကိုစီးပြီးသောအခါတွင်သင်၏ဒေသခံအရက်ဆိုင်တွင်ပိုင့်တစ်တင်းကိုယူနိုင်သည်, ဒေသခံ surfers နှင့်အတူ.
အဘို့: အဆင့်မြင့် surfers.
လှိုင်း: o.50 to 2.7 မီတာ.
4. ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations အများစု: ကလောင်, ဒိန်းမတ်
ငါးဖမ်းလှေများ, ပန်းချီဆရာ, နှင့်သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေနှင့်မြင့်တက်နေသည့်မြောက်ပင်လယ်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည် Klitmoller တွင်မြင်ရမည့်နေရာဖြစ်သည်. ဒီဘောင်နှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေ အလွန်သေးငယ်သော Klitmoller မြို့ကို Cold Hawaii ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်”.
surfing အပြင်, Klitmoller သည်ဥရောပမြောက်ပိုင်းရှိအပန်းဖြေစခန်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သငျသညျတစ်နှစ်ပတ်လုံးလှိုင်းတံပိုးစီးနင်း surfers နိုင်ပါတယ်. Klitmoller နှင့်ပတ်သက်သောအခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အရာတစ်ခုမှာကိုယ်တော်နှင့်နီးကပ်ခြင်းဖြစ်သည် အမျိုးသားဥယျာဉ် နှင့်၎င်း၏ ပြတိုက်, ဗိုက်ကင်းပုံပြင်များကိုသင်မှုတ်သွင်းနိုင်သည်, ပြီးပြည့်စုံသောလှိုင်းဖမ်းမီ.
အဘယ်ကြောင့်: ပြီးပြည့်စုံသောရာသီဥတုအခြေအနေ, အားလုံး surfers များအတွက်, တစ်နှစ်ပတ်လုံး.
5. la Graviere Wave ကို, Biarritz ပြင်သစ်
Biarritz ရှိကမ်းခြေများသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံရှိအိပ်မက်မက်ဖွယ်ကမ်းခြေအချို့ဖြစ်သည်, ဥရောပတစ်နိုင်ငံတည်းရှိခဲ့တာ. ထိုကွောငျ့, Biarritz သည်ဥရောပ၌လှည့်လည်ကြည့်ရှုရန်လှည့်လည်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ. La Graviere လှိုင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလှိုင်းများကိုဆွဲဆောင်ပြီးပြီးပြည့်စုံသောလှိုင်းအပြီး.
Hossegor သည်ပင်လယ်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်အတွက် visitors ည့်သည်များကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်နေစဉ်, ဒီမှာလှိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းဥရောပတိုက်တွင်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါကြောင့်, သငျသညျပြင်သစ်အတွက်လိုလားသူ surfers ထံမှကော်ဖီနှင့် croissants ကျော်ပြီးပြည့်စုံသောလှိုင်းအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရနိုင်သည်. ဖြည့်စွက်ကာ, Hossegor အိမ်ရှင် နှစ်ပတ်လည် WSL ကမ္ဘာ့ခရီးစဉ် အဖြစ်အပျက်.
အဘို့: အဆင့်အားလုံးနှင့်ပျဉ်ပြားအမျိုးအစားအားလုံးအပေါ် surfers.
ဘယ်တော့လဲ: နွေ ဦး ရာသီမှဆောင်း ဦး, အောက်တိုဘာလလယ်လောက်ကစပြီးမြို့ကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်, နှင့်လှိုင်းတံပိုးမော်ကွန်းမှတက်အထိ. ဒါကြောင့်, သင်သည်ဤမော်ကွန်းလှိုင်းလမ်းကြောင်းသို့သွားရန်သင်၏ခရီးကိုစီစဉ်နိုင်သည်, ကမ်းခြေရှိဟိုတယ်များတွင်သို့မဟုတ်ငှားရမ်းထားသောယာဉ်တန်းများတည်းခိုရန်.
လှိုင်းအရွယ်အစား: 0.5 သို့ 2.5 မီတာ.
6. ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations အများစု: Lewis က၏ကျွန်း, စကော့တလန်
အဘယ်မှာရှိမြောက်ဘက်ရောင်ရမ်းအတ္တလန္တိတ်တွေ့ဆုံရန်, လှိုင်းတံပိုးများနှင့်ပြင်းစွာသောလေတိုက်, စကော့တလန်တွင်အများဆုံးမော်ကွန်း surfing အစက်အပြောက်ကိုဖန်တီးပါ. လူးဝစ်ကျွန်းသည်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသောအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာပြင်ပဟီဘရိုက်ဒန်ကျွန်းများမှကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်သည် ပါသောနေရာများ စကော့တလန်၌တည်၏.
ထိုကွောငျ့, Lewis က၏ကျွန်းသည် surfing paradise တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးအဆင့်မြင့် surfers များအတွက်. ပြင်းထန်သောလှိုင်းတံပိုးများသည်လက်ဝဲဝါးနှင့်အခွင့်အရေးများကိုတွန်းလှန်ရန်နှင့်ဝင်ရောက်ရန်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်.
ဘယ်တော့လဲ: ဆောင်း ဦး နှင့်ဆောင်းရာသီ.
7. Scheveningen The Hague, နယ်သာလန်
ပန်းချီဆရာ, စွန်လွှတ်ခြင်း, သို့မဟုတ် surfing အခွင့်အရေးများ, ဟိဂ်သည်အားလပ်ရက်အားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ရုံ ရထားခရီးစဉ် အမ်စတာဒမ်မှဝေး. ရာသီဥတုဆိုးရွားနေပုံရသော်လည်းကြိုဆိုစရာမလိုပေ, ဒါပေမယ့် surfers များအတွက်, ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောလှိုင်းကိုစီးရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေများဖန်တီးပေးသည်.
၁၁ ကီလိုမီတာရှည်လျားသောကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်ရှိသင့်တော်သောရောင်ရမ်းခြင်းကိုသင်ဖမ်းယူနိုင်သည်, အထူးသဖြင့် Scheveningen ကမ်းခြေပေါ်မှာ. ဒီမှာ, သင်အားလုံးအဆင့်များနှင့်အကောင်းဆုံး surf ဆိုင်များနှင့်အဆောက်အ ဦ များပေါ်တွင် surfers ရှာတွေ့လိမ့်မည်.
ကောက်ချက်ချရန်, ဟိဂ်သည်လောက၏နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ for ကြောင့်လူသိများသည်, ၎င်းသည်ဥရောပရှိမော်ကွန်းအဝင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
8. ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations အများစု: စန်း Sebastian, စပိန်
ပြင်သစ်နှင့်စပိန်တို့အကြားနယ်စပ်တွင်, Basque အဘိဓါန်နိုင်ငံ၌တည်၏, San Sebastian သည်ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်, မော်ကွန်း surfing အစက်အပြောက်နှင့်အတူ. ဒီမှာ, သငျသညျလှိုင်းကနေ Tapas ဘားမှခုန်ပါလိမ့်မည်, ထို့နောက်အလှဆုံးစပိန်မြို့တစ်မြို့ရှိသဲသောင်ပြင်ပေါ်တွင်အနားယူပါ.
Cantabria တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကမ်းခြေနှင့်လှိုင်းနေရာအချို့ရှိသည်, Zurriola ကမ်းခြေလိုပဲ, San Sebastian အတွက်အဆုံးစွန် surfing ကမ်းခြေ. ဒါဟာအစပြုသူနှင့်အလယ်အလတ် surfers များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ခမ်းနားအမြင်များသည်, La Concha ကမ်းခြေရှိလှိုင်းများကိုစစ်ဆေးပါ.
အဘယ်ကြောင့်: ပွင့်လင်းပင်လယ်အော်ထဲမှာအမြန် lefts.
လှိုင်း: ကောင်းသောအနောက်ခြမ်းရောင်ပတ်ပတ်လည် - ပတ်ပတ်လည်.
9. Watergate ဂလားပင်လယ်အော်အင်္ဂလန်, Sennen Cove
Watergate ဂလားပင်လယ်အော်သည်ယူကေတွင် ၀ င်ရောက်ရန်နေရာဖြစ်သည်, နှင့်အင်္ဂလိပ်အမျိုးသား surfing ချန်ပီယံတက်ရောက်ရန်ရာပေါင်းများစွာ surfers သဘောတူပါလိမ့်မယ်. Windsurfing နဲ့ Wave Surfing တွေဟာအရမ်းကိုရေပန်းစားတယ်, Watergate ဂလားပင်လယ်အော်၏တ ဦး တည်းအောင် 10 ဥရောပ၌အများဆုံးမော်ကွန်း surfing နေရာများ.
Cornwell ရှိ Sennen Cove သည်နောက်ထပ်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ကမ်းခြေနှင့် surfing နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. Sennen Cove နှင့် Praa Sands တို့သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကမ်းခြေများနှင့်လှည့်လည်စီးနင်းနိုင်သောနေရာများဖြစ်သည်.
အဘယ်ကြောင့်: လေနှင့်ပွင့်လင်းမှုသည်အဆင့်တိုင်းတွင်ရှိသော surfers များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
10. ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations အများစု: Sardinia, အီတလီ
လှပသောအီတလီကျွန်းဆွယ် Sardinia ကျွန်းကိုပိတ်လိုက်သည် 10 ဥရောပရဲ့စာရင်းအများဆုံးမော်ကွန်းလှိုင်းနေရာများ, မြေထဲပင်လယ်နှင့်သဲသောင်ပြင်နှင့်အတူ. ဒီမှာ, သငျသညျအသေးမှအလတ်စားလှိုင်းတံပိုးကိုဖမ်းနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်အနောက်ဘက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်ခိုင်မာတဲ့လှိုင်းတံပိုး. ထို့အပြင်, နှင့် 300 ပြည့်စုံသောနေ့ရက်များ, Sardinia ဟာ surfing paradise တစ်ခုပါ.
သို့သျောလညျး, သင်မော်ကွန်းရောင်ရမ်းခြင်းစီးချင်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်၏ Sardinia တွင်သင်၏ surfing အားလပ်ရက်ကိုစီစဉ်ပါ, နိုဝင်ဘာလမှဇန်နဝါရီလအထိ. ကော့စ်ဗားဒါ, San Nicolo ရှိ Buggero, နှင့် Alghero အတွက် Porto Ferro ဖြစ်ကြသည်3of the beautiful and best beaches for surfing.
ဘယ်တော့လဲ: စက်တင်ဘာလမှနိုဝင်ဘာလအထိ, ဒါမှမဟုတ်မတ်လမှမေလအထိ.
လှိုင်း: 3-4 မီတာ.
တွင် တစ်ဦးကရထား Save, ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ရာ surfing အားလပ်ရက်ကိုစီစဉ်ရန်ကူညီပေးပါမည် 10 ဥရောပ၌အများဆုံးမော်ကွန်း surfing နေရာများ. ဦး တည်ရာသို့ရထားဖြင့်သွားရန်နှင့်အိမ်မှဝေးသောအိပ်မက်လှလှသောအိမ်သို့အလည်အပတ်ခရီးသည်အမြန်ဆုံးနှင့်ဈေးအသက်သာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ကို“ ဥရောပရှိ Epic Surf Destinations ၁၀ ခု "သင်၏ဘလော့ဂ်ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fmost-epic-surf-destinations-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
bestsurfingplaceseurope လှိုင်း surfcampseurope Surfing SurfingDestinations surfingholidayineurope wave